WPML: तपाईंको बहुभाषी प्लगइन र वैकल्पिक अनुवाद सेवाहरूको साथ तपाईंको WordPress साइट अनुवाद गर्नुहोस् Martech Zone
WPML: तपाईंको बहुभाषी प्लगइन र वैकल्पिक अनुवाद सेवाहरूको साथ तपाईंको WordPress साइट अनुवाद गर्नुहोस्
मंगलवार, नोभेम्बर 24, 2020 मंगलवार, नोभेम्बर 24, 2020 Douglas Karr
WPML एक बहुभाषी WordPress साइटमा तपाईंको सामग्री विकास र अनुवादको लागि उद्योगमा मानक हो। म हाल चलाइरहेको छु GTranslate प्लगइन अन Martech Zone सरल, बहुभाषी मेशिन अनुवाद गर्न। यसले हाम्रो पहुँच विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गरिएको छ साथै मेरो साइटमा सर्च इन्जिन ट्राफिक पनि चलाउँदछ।
हामी अहिले एक ग्राहकको लागि एक साइट तैनाथ गर्ने काम गर्दैछौं जुन एक महत्वपूर्ण हिस्पैनिक जनसंख्या छ। जबकि GTranslate जस्ता प्लगइनले मेशिन अनुवाद राम्रोसँग गर्न सक्दछ, यसले हाम्रा ठूला मेक्सिकन-अमेरिकी दर्शकहरूको लागि बोलीको सूक्ष्म अंशहरू लिन सक्दैन जुन हामी आशा गर्दछौं। यसको लागि, हामी पेशेवर अधिकतम प्रभावको लागि सामग्री अनुवाद गर्न जाँदैछौं।
अनुकूलन अनुवादको लागि बिभिन्न समाधानको आवश्यक पर्दछ, र वर्डप्रेस अनुवाद प्लगइनहरूमा नेता हुनुहुन्छ WPML.
तपाइँको WordPress साइट WPML का साथ कसरी अनुवाद गर्ने
WPML सुविधाहरू समावेश गर्दछ
WordPress - नेभिगेसन, विजेटहरू, पृष्ठहरू, लेखहरू, अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरू, वा कुनै पनि अन्य तत्त्व सहित तपाईंको प्रत्येक वर्डप्रेस साइटमा अनुवाद गर्नुहोस्। WPML ले गुटेनबर्ग सम्पादकलाई पनि समर्थन गर्दछ।
भाषा - WPML 40० भन्दा बढी भाषाहरूसँग आउँदछ। तपाइँ WPML को भाषा सम्पादक प्रयोग गरेर तपाइँको आफ्नै भाषा रूपहरू (क्यानाडाली फ्रान्सेली वा मेक्सिकन स्पेनिश) थप्न सक्नुहुन्छ।
URL संरचना - तपाईं समान डोमेन (भाषा डाइरेक्टरीहरूमा), सब-डोमेनहरू, वा पूर्ण रूपमा फरक डोमेनहरूमा फरक भाषा सामग्रीहरू व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ।
मेशिन अनुवाद - मेशिन अनुवाद प्रयोग गरेर तपाईको अनुवादमा हेडस्टार्ट पाउनुहोस् ताकि तपाईले केहि समय बचाउन सक्नुहुनेछ र अनुवाद सेवा लागत स्ट्रिममा।
प्रयोगकर्ता अनुवाद - साधारण वर्डप्रेस प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुवादकमा बदल्नुहोस्। अनुवादकहरूले मात्र विशिष्ट अनुवाद रोजगारहरू पहुँच गर्न सक्दछन् जुन अनुवादकहरू उनीहरूलाई दिन्छन्।
अनुवाद सेवाहरु - WPML को शक्तिशाली अनुवाद प्रबंधन को साथ तपाईको छनौटको अनुवाद सेवा संग कनेक्ट गर्नुहोस्। सुविधाजनक रूपमा WPML को अनुवाद ड्यासबोर्डबाट सीधा अनुवादको लागि सामग्री पठाउनुहोस्। जब अनुवाद पूर्ण हुन्छ, ती प्रकाशितको लागि तयार, तपाइँको साइटमा फेरि देखा पर्दछ।
थिम र प्लगइन स्ट्रिंग अनुवाद - WPML ले तपाईंलाई PO फाईलहरू सम्पादन गर्ने र MO फाइलहरू अपलोड गर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्दछ। तपाईं पाठहरू अन्य प्लगइनहरूमा र प्रशासन स्क्रिनमा सिधा बाट अनुवाद गर्न सक्नुहुनेछ स्ट्रिंग अनुवाद इंटरफेस।
WooCommerce बहुभाषी समर्थन
WooCommerce को साथ बहुभाषी ई-कमर्स साइटहरू चलाउनुहोस्। सरल र भेरिएबल उत्पादहरू, सम्बन्धित उत्पादनहरू, बिक्री र पदोन्नतीहरूको लागि पूर्ण समर्थनको मजा लिनुहोस्, र WooCommerce ले प्रदान गर्ने अरू सबै कुरा।
WPML ले तपाईंलाई देखाउँदछ कि कुन पाठलाई अनुवाद आवश्यक छ र तपाईंको लागि पूर्ण अनुवादित स्टोर निर्माण गर्दछ। आगंतुकहरूले कार्ट र चेकआउट, र साथै स्थानीयकृत पुष्टि ईमेलहरू मार्फत, उत्पाद सूचीबद्धको साथ सुरू गरेर एक पूर्ण स्थानीयकृत खरीद प्रक्रियाको आनन्द लिने छन्।
बहुभाषी-तयार थिमहरू सिर्जना गर्न तपाईंले विशेष केहि गर्नुपर्दैन। केवल WordPress एपीआई प्रकार्यहरू प्रयोग गर्नुहोस् र WPML ले बाँकीको हेरचाह गर्दछ।
WPML डाउनलोड गर्नुहोस्
खुलासा: म एक सम्बद्ध छु WPML.
टैग: बहु-भाषाबहुभाषी WordPressबहुभाषी permalink संरचनाप्लगइन अनुवादअनुवाद सेवाहरूWooCommerce अनुवादWordPressWordPress अनुवादWordPress अनुवाद प्लगइनwpml